Diinta keliya ee xaqa ah Ilaahayna ogol yahay waa islaamka – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa ka digay halista gaalnimada, iyo hal-ku-dhigyada in diimahu dhamaantood sammada ka soo degeen, oo hadaan laga hortegin keenaysa in si loo wada arko islaamka iyo gaalnimada, ama wanaaga iyo xumaanta.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in kitaabka quraanku nasakhay dhamaan kutubtii ka horeysay ee soo degay, waxaanu yidhi, “Diinta islaamku waxay inoo caddeysay in kitaanka quraanku nasakhay dhamaan kutubtii ka horeysay, wax lala yaabana maahee, kutubtii reer Banu-Israa’iilna qaar ka horeeyey ayey nasakheen. Sida ilaahay ayaado ugu sheegay in ‘kitaabka quraanku yahay mid nasakhaya kuwii ka horeeyey’.
Cid kasta oo ka hortimaada diinta islaamka, yuhuda iyo nasaaro magacoodu waxuu noqonayaa gaal, lagalama gabanayo, ayuu sheegay Sheekh Maxamed oo aaminsan nahay, waxaanu yidhi, “Cid kasta oo diinta islaamka ka hortimaada, yuhuud, nasaaro iyo kuwa asnaamta caabuda waa gaalo, sida Ilaahay quraanka ugu yidhi, ‘Waxaad tidhaahdaa gaalooy’, side ayeynu ugala gabanaa inaynu magacaa ugu yeedhno, waynu ugu yeedhaynaa gaalo.
Hadii aragtida in diimahu dhamanatood sammada ka yimaadeen, aan laga hortegin waxa imanaya halis ayuu sheegay Sheekh Maxamed isagoo ka hadlanaya waxuu yidhi, “Hadii aragtida in diimahu isku mid yihiin aan laga hortegin waxa meesha ka baxaya kala duwanaashaha xaqa islaamka iyo baadilka gaalnimada, waxa meesha ka baxaya wanaagii (waxii islaamku keenay) iyo xumaan (waxii gaalnimadu keentay).